RW Japan Shinzo Abe oo Afrika u balanqaaday $30 bilyan afarta sanno oo soo socda - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldRW Japan Shinzo Abe oo Afrika u balanqaaday $30 bilyan afarta sanno oo soo socda
August 27, 2016 Abdirahman Abdullahi Sheikh World 0
Raysulwasaaraha dalka Japan Shinzo Abe oo ka qaybgalaya shirka iskaashiga Afrika iyo Japan. Sawirka: Reuters.
Nairobi-(Puntland Mirror) Raysulwasaaraha dalka Japan Shinzo Abe ayaa u sheegay hoggaamiyaasha qaarada Afrika maanta oo Sabti ah in dalkiisa uu u balanqaadayo $30 bilyan oo dhaqaale ah oo lagu taageerayo kaabayaasha guud iyo kan gaarka ah ee qaarada.
Abe, oo ku sugan caasimada dalka Kenya si uu uga qaybgalo shir-weynaha lixaad ee iskaashiga Japan iyo qaarada Afrika oo maanta halkaas ka furmay ayaa balanqaadkaas jeediyay, isagoo sheegay in dhaqaalahaas uu bixi doono saddexda sanoo oo soo socda, isagoo xusay in sanadkan uu kamidyahay $10 bilyan oo loo isticmaali doono mashaariicda kaabayaasha qaarada, iyadoo loo sii marin doono Bangiga Horumarinta Afrika.
Abe ayaa sheegay in dhaqaalaha uu balanqaaday waxyaabaha loo isticmaalayo ay kamidyihiin kor u qaadida wax soo-saarka shaqaalaha iyo daryeelka caafimaadka.
Japan oo mar ahaan jiray dalka ugu weyn oo xiriir ganacsi la leh Afrika ayaa tartan kula jira Shiinaha oo hadda ah dalka ugu weyn oo xiriirka ganacsi kala dhaxeeyo qaarada Afrika.